Fiteny malay - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiteny Malay)
Isan'ny mpiteny 25 tapitrisa (ao Malaizia) 250 tapitrisa (raha atambatra amin'ny fiteny indonezianina)
Sata Teny ofisialy any Malaizia, Singapaoro ary Indonezia
Ny fiteny malay dia fiteny aostronezianina izay tenim-pirenen'i Malaizia, Indonezia ary Boroney. Anisan'ny teny ofisialin'i Singapaoro ihany koa ilay fiteny, na dia tsy fiteny iombonana intsony aza. Efapolo tapitrisa no isan'ny olona mahay miteny malay, izay hita eo amin'ny manodidin'ny fahateren'i Malacca, ary ny amorontsiraky ny nosy Borneo ary ny faritra atsinanan'i Sumatra. Noho ny sata ofisialiny dia mahery ny roanjato tapitrisa no isan'ny olona mahay miteny malay (raha isaina ao anatin'izay ny isan'ireo olona mahay miteny indonezianina).
3 Fomba fanoratana
7 Jereo koa
7.1 Rohy ivelany
Mifanaraka amin'ny fiavian'ny teny malay ho avy amin'ny amorontsiraka andrefan'i Borneo ireo mpahaitsikerafiteny malay.
Kanefa kosa, ny tahirin-tsoratra antitra indrindra hita tamin'ny fiteny mala, ny soratra Kedukan Bukit, izay nosoratana atamin'ny taona fitonjato taorian'i Jesoa Kristy, ary hita teo moron'ny ony Tatang, ao Sumatra Atsmo. Ny fiteny nosoratana tamin'izany fotoana izany no nolazaina fa malay taloha. "Malayu" no anaran'ilay fanjakana taloha teo amin'ny misy an'i faritanin'i Jambi ao atsinanana'i Sumatra. "Mo-lo-yo" no anaran'izany fanjakana izany tanatin'ny tahirintsoratra sinoa.
Vokatry ny fandrantoana ary ny fiorenan'ny fanjakana malay silamo eraky ny tambanosy malay ny fampiasana ny fiteny malay ho fiteny iombonana. Nampiasa teny malay an-tsoratra ny tao Malacca. Taorian'ny fandresen'ny portogey tao Malacca tamin'ny 1511 dia niova ho tany amin'ny soltanatin'i Johor ny foiben'ny fiteny soratana. Ary antsoina matetika ho malain'i Johor ny fiteny an-tsoratra, na dia fiteny malain'i Malacca foana aza no ampiasaina. Rehefa voazaran'ny mpanjana-tany ny faritany itenenana malay (anglisy ao Johor ary ny nerlandey tao India Atsinanana Nerlandey), dia nomena sata ofisialy tamin'ireo faritany ireo ny fiteny malay.
Rehefa nahaleotena i Indonezia dia ny teny malain'i Riau (Malacca-Johor) no nataony ho teny ofiialiny. Manomboka tamin'ny 1928, nolazain'ireo tanora malay ary ireo tia tanindrazana eraky tambanosy fa ho teny ofisialy erak'i Indonezia ny fiteny malay, araky ny nambaran'i Sumpah Pemuda. Indonezia no firenena voalohany mahaleotena mampiasa ny fiteny malay ho fiteny ofisialy.
Any Malaizia, ny andininy faha-152 ny Federasiôna dia mambara fa ho teny ofisialy (Bahasa Malaysia) ny teny malain'i Johor (Malacca). Tamin'ny 1986 dia navadika ho Bahasa Melayu ny anarana ofisialin'ny teny ofisialin'i Malaizia, fa niova indray ilay izy nanomboka tamin'ny 2007.
Teny ofisialin'i Boroney ny Bahasa Melayu araky lalam-panorenana tamin'ny taona 1959. Mifototra amin'ny fenitra Malaccanina ilay fiteny.
Mety samihafa ny voambolana ampiasain'ny fiteny malay sy ny fiteny indonezianina nohon'ny fivoarana misaraka vokatry ny fanjahanan-tany. Ireo tenin'ny mpnjana-tany no tena nianjady tamin'ireo fiteny ireo. Ao amin'ny fiteny indonezianina izao ohatra dia ahitana teny maromaro avy amin'ny fiteny nerlandey ; ary ahitana teny anglisy maromaro ao amin'ny fiteny malay. Nampiombonana ny tsipelin'ny fiteny malay ary indonezianina tamin'ny 1982, ary namorona komisiona hampiombona ny voambolana siantifika ary ara-teknika miaraka amin'i Boroney ireo firenena roa ireo.
Ny fiteny malay dia fiteny ao amin'ny vondrom-piteny aostronezianina, izay ahitana ny fiteny tagalaoga ary ny fiteny malagasy. Na dia tsy mifankahazo aza ny mpiteny malay sy ny mpiteny malagasy, mahataitra ny fitoviany. Maro ny teny iraisan'ireo fiteny maro ireo, indrindra indrindra mikasika ny fahssalamana, ny vatana, ary biby iraisana. Betsaka koa ny fitovizana amin'ny anaran'ny isa.
Mampiasa ny abidy latina (Rumi) ny fiteny malay ankehitriny. Na dia mbola miasa koa aza ny abidy arabo (Jawi). Abidy ofisialin'i Malaizia, Singapaoro ary Indonezia. Samy ofisialy any Malaizia ary any Boroney ny rumi sy ny jawi. Nosoratana tamin'ny alalan'ny soratra Pallava ary Kawi ny fiteny malay taloha, araka ny vato nasian-tsoratra ao amin'ny faritra malay.
Tabilaon'ny renifeo amin'ny fiteny malay manara-penitra
p b t d tʃ dʒ k ɡ (ʔ)
(f v) s (z) (ʃ) (x) h
Indran-teny avy amin'ny fiteny arabo
Mety hotononin'ireo mpahay teny arabo hafa ireo feon'ny teny avy amin'ny teny arabo. Raha tsy izany dia mety ho voatonona araky ny fitsipiky ny fiteny malay.
Tabilaon'ny teny nindramina tamin'ny teny arabo
/x/ /k/, /h/ khabar, kabar "vaovao"
/ð/ /d/ redha, rela "tsara sitra-po"
/zˁ/ l, z lohor, zuhur "mitatao vovonana"
ɣ ɡ, r ghaib, raib "miafina"
ʕ ʔ saat, sa'at "segondra"
Fanambarana Iraisam-pirenena momban'ny Zon'Olombelona Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia Perisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat
Andininy 1 Pasal 1 Perkara 1
Teraka afaka sy mitovy zo sy fahamendrehana ny olombelona rehetra. Samy manan-tsaina sy fieritreretana ka tokony hifampitondra am- pirahalahiana Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi maruah dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bergaul dengan semangat persaudaraan.
Teny manaiky ny fitambatambaran'ny voambolana ny fiteny malay, ary azo foronina amin'ny alalan'ny fomba telo ny teny vaovao : fanisiana tovona na tovana amy fototeny iray, fanaovana teny mikambana, na famerimberenana fototeny iray. Mety fototeny tsotra ny anarana ary ny matoanteny, fa matetika asiana tovona, tovana na tovona aman-tovana izy ireo.
Tsy manavaka ny teny amin'ny alalan'ny karazana ny teny malay, ka tsy misy ny karazana ''andehilahy'' na ''ambehivavy". Tsy misy ihany koa ny mpampanavaka ireo ''singiolary'' sy ny ''ploraly''.
((id)) Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (Rakibolana lehibe amin'ny teny indonezianina)
((ms)) Dewan Bahasa dan Pustaka
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_malay&oldid=691475"
Dernière modification le 15 Febroary 2014, à 10:57
Voaova farany tamin'ny 15 Febroary 2014 amin'ny 10:57 ity pejy ity.